सानो-सानो कुरामा भावुक भइहाल्छन् यी राशिका व्यक्ति, देख्नै सक्दैनन् अरुको दुख – List Khabar
Home / धर्म सस्किर्ती / सानो-सानो कुरामा भावुक भइहाल्छन् यी राशिका व्यक्ति, देख्नै सक्दैनन् अरुको दुख
सानो-सानो कुरामा भावुक भइहाल्छन् यी राशिका व्यक्ति, देख्नै सक्दैनन् अरुको दुख
admin August 23, 2021 धर्म सस्किर्ती Leaveacomment 120 Views
कुन बार जन्मिने महिला र पुरुष हुन्छन् सबैभन्दा धनी र भाग्यमानी ?
मायामा एकदम पक्का हुन्छन यी ३ राशिका महिला, दिन्छन जीवनभर साथ
काठमाडौँ । सायद संसारमा यस्ता व्यक्तिहरु पनि छन् होला जो अरुको नियन्त्रणमा आफ्नो जीवन बिताउन चाहान्छन्।
जसले लगनशीलताका साथ सबै समस्याहरुको सामना गर्छन् भने कतिपय त्यस्ता मानिसहरु पनि हुन्छन् जसले समस्याको अगाडि आफ्नो घुँडा टेक्छन्।
तर केहि यस्ता व्यक्तिहरु पनि छन्, जो आन्तरिक रूपमा जति विचलित भए पनि संसारलाई यस्तो देखाउछन् कि केही पनि भएको छैन, जस्तो कि सबै ठीकठाक छ।
अब यी व्यक्तिहरु को हुन् भनेर चिन्न कडा परिश्रमको आवश्यकता पर्दैन। किनकी राशि अनुसार थाहा हुन्छ कि को हुन् ती व्यक्ति ? जसले आफैमा धेरै दुःख लुकाए पनि, अझै पनि संसारको सामु हाँसिरहेका छन्।
आउनुहोस् राशि अनुसार ति साहसी व्यक्तिहरुका बारेमा चर्चा गरौ। यी साहसी नै हुन् किनकि दुःख लुकाउन त्यति सजिलो हुँदैन्।
कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरु आफूले माया गर्ने व्यक्तिलाई दुखी देख्न सक्दैनन्। न त उनीहरु आफ्नो दुख अरुलाई भन्न रुचाउछन्।
उनीहरु विश्‍वास गर्छन् कि संसारको अगाडि आफ्नो दु:ख पोखेर केहि फाइदा हुदैन। त्यसैले जति नै दुख पिडा भए पनि उनीहरु सहजै मुस्कुराउँछन्। तपाई अनुमान पनि गर्न सक्नुहुन्न कि उनीहरुको मनमा के चलीरहेको छ।
Previous तालिबानको सत्तामा महिलाहरु बच्चा जन्माउने मेसिन मात्रै हुनेछन्’ : अभिनेत्री वारिना हुसैन
Next विर्तामोडमा परिवारकै बिल्लीबाठ गराउने युट्युबर काण्ड, वास्तविक घटना के थियो ?
चाणक्य भन्छन् – बिहेपछि यसकारण अर्की महिलाप्रति आ’कर्षित हुनु हुन्न…
आचार्य चाणक्यको नीति वर्तमान जी’वनमा पनि प्रासंगिक मानिन्छ ।यदि कसैले आफ्नो जीवनमा चाणक्य नीतिको पालना …